Global Voices teny Malagasy » Ny tsiahin’ny karnavaly lavitry ny firenena – votoaty tao amin’ny bilaogy Boliviana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Mey 2019 3:51 GMT 1	 · Mpanoratra Eduardo Avila Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Bolivia, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny 05 Marsa 2006)
Jereo ny sary nalain'i Marcelo Montecino avy amin'ny Carnaval 1994 tao Oruro ity ao amin'ny pejiny Flickr .
Manamarika ny fiandohan'ny Karemy ao Bolivia ny Alarobian-davenona, Katolika Romana no ankamaroan'ny mponina ao Bolivia. Nifarana tamin'ny fomba ofisialy ny vanim-potoana Karnavaly ary maro tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Boliviana no mahatsiaro ireo andro ireo miaraka amin'ny embonembona toy izany. Boliviana sy vahiny no samy mandray anjara tanteraka, na any Bolivia na lavitry ny tanindrazan'izy ireo.
Efa-taona lasa izay no fotoana farany nandraisain'i Alexey anjara tamin'ny Karnavaly tao an-tanànany ao Oruro. Mipetraka any ivelany any Holandy izy izao, ary maneho hevitra ao amin'ny blaoginy Alexey Writes, fa noho ny antony sasany, nihevitra izy fa manina kokoa ny fety  noho izay ao aminy ary angamba satria fantany fa tsy mora ny miverina any Bolivia. Nanambara izy na dia izany aza fa ny Karnavaly ao Oruro no “hany mendrika handraisana anjara, na dia mahatsapa toy izany aza ny olona avy ao Oruro.” Vao haingana izy no niverina tamin'ny dia fohy tany Slovenia , nandritra ny fotoanan'ny karnavaly.
Isabella Fuente koa nahita ny tenany fa lavitry ny fialam-boly, araka ny ambarany ao amin'ny bilaoginy Ergoth. Monina any Madrid, nanangana ny Karnavaliny manokana tamin'ny sora-baventy izy, saingy nahita fa tsy nisy rivotry ny fety tao Espaina. Noho izany dia nandeha tany amin'ny sarimihetsika izy ary nijery horonantsary mivantana avy any Oruro tao amin'ny efitra fatoriany.
Oruro no mety ho faritra malaza indrindra ao Bolivia izay ankalazàna ny Karnavaly, na izany aza, saika mankalaza amin'ny fombany manokana sy miavaka ny ankamaroan'ny lafivalon'ny firenena. Rolando avy ao amin'ny Rocko Weblog manazava ny fomba handanian'ny Boliviana ao Santa Cruz, Tarija sy La Paz ireo andro ireo. Mamaritra ny fombafomban'ny “martes de ch'alla” ihany koa izy, izay atao ny talatan'ny fety ka isaoran'ny olona ny “la Pachamama” (tany reny) ho an'ny andro ho avy.
Tsy misy fankalazana feno raha tsy misy sakafo sy zava-pisotro. Miguel Esquirol mampilendalenda ny mpamaky amin'ny famaritana feno ahitana sarina sakafo nentin-drazana antsoina hoe “Puchero de Carnaval” ao amin'ny bilaoginy El Forastero. Ity sakafo avy amin'ny Cochabamba ity dia aroso manokana amin'ny andron'ny “martes de ch'alla” ary ahitana henan'omby, zanak'ondry, ovy, vary, chuño (ovy maina), ary ají (laron-tsakafo masiatsiaka).
Jim Shultz, monina ao Cochabamba, manoritsoritra ireo mpifanolo-bodirindrina izay mankalaza amin'ny fisotroana toaka chicha , izay vita avy amin'ny katsaka nalòna, ary nahafantatra ny fomba amam-panao miaraka aminy. Fantany na izany aza ny fomba filalaovana ny lalao mba handosirana ny lahatra sasantsasany.
Thankfully there is an escape clause. Before you finish you are supposed to dump some on the ground for La Pachamama, mother earth. It is a tradition that has saved my ass more than once when a Bolivian party turns it attention to the noble game, “Make that gringo drink!”
Soa ihany fa misy ny fepetra fandosirana. Alohan'ny hamarananao, dia tokony hanana vitsivitsy eo an-tany ianao ho an'ny La Pachamama, reny tany. Fomban-drazana izay namonjy ny ampondrako mihoatra ny indray mandeha izany rehefa misy fety Boliviana mamadika izany amin'ny lalao mendrika, “Ataovy misotro ity io gringo [avy any etazonia] io!”
Farany, Nick Buxton manoratra ny ventsoventsony amin'ny Karinavaly  ao amin'ny bilaoginy Open Veins.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/08/138231/
 pejiny Flickr: http://www.flickr.com/photos/marcelo_montecino/sets/1593362/
 noho ny antony sasany, nihevitra izy fa manina kokoa ny fety: http://mrchebas.blogspot.com/2006/02/carnival-almost-over.html
 tamin'ny dia fohy tany Slovenia: http://mrchebas.blogspot.com/2006/02/i-am-in-ljubljana.html
 nanangana ny Karnavaliny manokana : http://ergoth-fenix.blogspot.com/2006/02/carnaval.html
 Mamaritra ny fombafomban'ny “martes de ch'alla” : http://rocko.blogia.com/2006/030101-pinceladas-del-carnaval-boliviano.php
 sarina sakafo nentin-drazana antsoina hoe “Puchero de Carnaval” : http://elforastero.blogalia.com//historias/37861
 manoritsoritra ireo mpifanolo-bodirindrina izay mankalaza amin'ny fisotroana toaka chicha: http://www.democracyctr.org/blog/2006/02/why-i-love-cochabamba.html
 ventsoventsony amin'ny Karinavaly: http://www.nickbuxton.info/bolivia/2006/02/carnival.html